Mobile Mobile na Mgbasa Ozi | Martech Zone
Monday, June 27, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Ihe omuma ihe a bu ndi mmadu dere na Mkpado Microsoft. You mara na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ Facebook na-enweta ya site na ekwentị? Ma ọ bụ na a na-elele vidiyo vidiyo Youtube 200 site na mkpanaka? Ma ọ bụ nke ahụ, na nkezi, anyị na-etinye awa 2.7 kwa ụbọchị na ekwentị mkpanaaka… na 91% nke ọrụ a bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Ọ bụrụ na ịmaghị ọdịiche dị n'etiti Tag na QR Code, lee, ha dị na saịtị Microsoft Tag:
Microsoft Tag bụ a mobile 2D barcode na-ahapụ gị seamlessly jikọọ gị offline ihe na dijitalụ ụwa. Mee ndị ahịa gị oge a n'iji ekwentị ha.
Tag vs. QR: N'adịghị ka QR, Tag bụ njedebe na-akwụsị barcoding ngwọta na-emepụta customizable Koodu, na-eji otu agụ maka a na-agbanwe agbanwe ọgwụgwụ ahịa ahụmahụ na-anapụta siri ike akuko.
Report & Measure: Tag nwere igwe eji arụ ọfụma na-enye gị ohere ịlele ịdị mma nke ihe ndị na-adịghị n'ịntanetị gị. Lelee ebe na mgbe a na-enyocha nyocha gị - n'efu.
Agile: Teknụzụ dị egwu nke Tag na-eme ka azụmaahịa gbanwee mkpọsa n'oge ọ bụla, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịzaghachi ma gbanwee n'oge ma wepụta nsonaazụ kachasị ike.
Etu ị ga - esi nweta echi ọhụrụ Google ga -
Jun 27, 2011 na 1: 27 PM
Mobile Web bụ ọdịnihu
Feb 5, 2015 n’elekere 12:50 nke abali
Ebu m ohuru. Achọrọ m enyemaka biko.
Feb 6, 2015 na 4:30 PM
Olee ụdị enyemaka ị chọrọ Stephen?